ARTUZ Shona Updates—-Zvikamu zviviri zvinechiga kubva muzana zvakonzeresa nyonga nyonga muvashandi vehurumende yeZimbabwe. – ARTUZ
28 Mukadzi 2020
Boka remubatanidzwa wevarairidzi vekumaruwa reArtuz rinoshora danho ratorwa nekabhineti rekuda kubatira vashandi mari dzavo kuti dzibetseredze kuvhurwa kwezvitoro zvemauto ayo arikunonga svosve nemuromo, zvirikungoitawo munhu wose munyika.
Mauto aratidzawo kugumbuka nedanho rakatorwa achiti zvinokonzera kusawirirana munyika. Artuz inoti varikuda kuendesa danho iri mberi varwisi veupfumi.
Artuz inoramba maitiro akadai, ichiti hazvifambidzani nezvinotarisirwa nguva yatiri. Artuz inokurudzira mutungamiri wenyika vaMunangagwa kuti vazeye nekunzvera maitiro arikuitwa zvinhu negurukota ravo remari, iro vazhinji vavakuti ravakudhanganyika pfungwa. Artuz inokurudzira mamwe mapoka anomirira vashandi kuti vanyorere tsamba dzenyunyuto kuna vaMnangagwa nekuchimbidza. Dambudziko ririmunyika haripedzwe nekudzika zvitoro zvechikamu chimwe chevashandi asi kuvandudza upfumi.
Artuz inokurudzira kudzokera pakushandisa mari dzekunze parizvino apo tichifanogadzirisa zviga zvinoita mari yedu iite simba. Hurumende inofanirwa kurwisana neavo vakazvipa masimba akanyanya muupfumi avo vanonzi makatero pachingerengere. Humbavha hurikuda kuitwa uhwu ngahumire nhasi uye gurukota na gavhuna webhanga guru renyika reRBZ vanofanirwa kupfira chikomba patsika yavo yavave kuita madiro aJojina nehupenyu hwevanhu munyika. Artuz inoti haisi kuzozorora kusvika hurumende yatsveta tsika yerudado.
Teverai padandemutande reTwita @ARTUZ-teachers
Tidei pabhukuremeso:Rural Teachers Union in Zimbabwe
Previous PostARTUZ TONGA UPDATES— Zipanzi zyobilo achimwi, zyayeta lupyopyongano kubabeleki bamfulume yaZimbabweNext PostDivisive 2,5% tax: An attempt to destabilise Civil Service.